❤️ Ahoana ny fomba hifandraisana amin'ny influencers amin'ny Instagram - Winches Club
Raha te hifandray amin'ireo marika lehibe sy influencer ao amin'ny akany ao amin'ny Instagram ianao, misy ny zavatra tokony ho fantatrao mba tsy ho voatifitra ianao.
Misy mpampiasa Instagram mavitrika mihoatra ny iray tapitrisa, ary raha te hanana ity fiaraha-miasa ity amin'ny influencer lehibe na marika malaza, mila miavaka ianao ary alao antoka fa re ianao. Instagram no iray amin'ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ny marika hafa ary hampitomboana ny media sosialy sy ny fisian'ny orinasanao..
Ity lahatsoratra ity dia momba ny fomba tsara indrindra hanintonana ny sain'ny olona ary hampientanentana azy ireo ny fiaraha-miasa aminao.. Tadidio fa ny sasany amin'ireo kaonty Instagram lehibe handray hafatra an-jatony isan'andro, noho izany dia zava-dehibe ny hisongadinana sy hanantonana azy ireo eo noho eo.
Mifandraisa marika sy mpanentana amin'ny Instagram
Raha mikasa ny hanana fiantraikany amin'ny kaonty influencer ianao, na ny habeanao na ny haben'ireto, tsy maintsy hanao izao manaraka izao ianao:
Mikendry ny olona mety – tsy misy dikany ny fandefasana hafatra amin'ireo olona tsy liana aminao na tsy mifanaraka amin'ny sarinao sy ny toetranao
Mitondrà lanja ho azy ireo – maro ny olona mifantoka amin'izay ezahany ho tratrarina, fa tsy mifantoka amin'ny fomba hanampiany ilay olona tratrany
Ekeo ny fandavana – tsy maintsy mandefa hafatra be dia be ianao ary maro amin'izy ireo no tsy hahita ny mariky ny anarany, koa miomàna hanaiky holavina
Miorina amin'ny fanoloran-tena – mila manohy manao izany ianao ary tsy milavo lefona, na dia eo aza ny fandavana hatrany sy ny tsy fahalalana Ankehitriny dia manana hevitra fototra momba ny fomba hirosoana ianao, andao hiditra amin'ny antsipiriany.
Mikendry ny olona mety
Mba hahazoana ny valiny tsara indrindra, tsy maintsy mikendry ireo kaonty mifandraika amin'ny atiny ianao. Vao haingana izahay no namoaka lahatsoratra momba ny fomba hahitana kaonty vaovao haingana ao amin'ny akany., vakio haingana araka izany raha te hanana kaonty marobe ianao.
Azonao atao koa ny mampiasa fomba lalindalina kokoa, amin'ny mitady tenifototra na toerana misy ifandraisany amin'ny akany sy fandinihana ny kaonty tsirairay hifandraisana. Manao izany, andramo tsy manahy be loatra amin'ny isan'ny mpanaraka anao, fa mifantoha amin'ny tahan'ny fifamofoana sy ny kalitaon'ny atiny.
Mitondrà lanja ho azy ireo
Raha tokony handefa hafatra an-jatony mangataka zavatra mitovy amin'izany, fa manandrama mitady fomba hampiakarana ny sandan'ity kaonty ity. Mety ho mora toy ny manome atiny azy ireo izany, andefaso santionany amin'izy ireo, na manolotra endrika fampiroboroboana azy ireo mihitsy aza.
Ity safidy farany ity dia mety hahaliana raha manana mpanaraka an-tserasera marobe amin'ny sehatra hafa toy ny tranokalanao na Facebook ianao., fa ny sampanao amin'ny Instagram. Omeo sanda fanampiny izy ireo fa tsy angatahina zavatra fotsiny, ary mety ho hitanao fa mahafaly tsara kokoa ireo takinao ireo kaonty ireo.
Ekeo ny fandavana
Mety tsy maintsy mandefa hafatra be dia be ianao alohan'ny hahatongavanao amin'ny toerana rehetra, ary ho be ny fandavana ary koa ny lahatsoratra tsy raharahaina. Ny zava-dehibe indrindra dia ny tsy hitondra azy manokana, mety efa nandray azy ireo ianao tamin'ny fotoana ratsy na, raha mandray hafatra be dia be izy ireo, mety tsy hahita ny manager umum anao izy ireo. Miezaha milalao amin'ireo isa ary aza avela hisy fiantraikany eo aminao ny fandavana, afaka fotoana fohy vao manomboka mamaly anao ny olona.
Manaraka ny fizarana teo aloha, mila mandefa hafatra be dia be ianao ary ny zava-dehibe indrindra azonao atao dia ny mijanona ho mazoto amin'ny hetsika ataonao. Mety mila mandefa hafatra 100 ianao vao misy mamaly ny fangatahanao, na mety 1000 aza, fa tsy maninona satria mitranga foana amin'ny farany.
Ny zavatra tsara dia, izay vao manana fiaraha-miasa ao anaty kitapo ianao, azonao ampiasaina amin'ny tombontsoanao ity hahazoana olon-kafa. Azonao atao ny milaza amin'ny mpanjifanao : “Miara-miasa amin'ity mpanjifa ity aho amin'ity tetikasa ity, Nanantena ny hampiditra anao koa aho”.
Mety ho mpirakidraharaha tsara izy io ary mety hahaliana anao amin'ny olona maro kokoa., inona no azon'ny volom-panala amin'ny hetsika tambajotrao.
Lahatsoratra teo alohaFitaovana fikarohana Hashtag Instagram
Lahatsoratra manarakaAhoana no hahafantarana raha nisy nanakana anao tao amin'ny Instagram